Breaking news: Xayyibaan dhugaa dhoosuuf? Warqinaan hoo? Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBreaking news: Xayyibaan dhugaa dhoosuuf? Warqinaan hoo?
#Breaking news: Xayyibaan dhugaa dhoosuuf? Warqinaan hoo?
Sabboontoonni ODP kan moggaatti dhiibaman gad bahan dhugaa. Oromoo dubbachuuf qophaa’aa jiru. Araan Abiyyii qabsoo Oromoo miidha, nafxanyaa goobsa jedhu. Waldhabbiin Lammaa Magarsaa fi Abiy Ahmad jiddutti dhalate
waldhaba kaayoo malee kan dhuunfaa miti jechuun sabboontoonni.Oromoo ODP keessa turan dubbatan. Araarri dhuunfaa rakkoo kana hin furuu jedhan. Rakkoon kun furachuuf, Abiy Ahmad kaampii diinaa. keessaa gara kaayoo sabaatti deebi’uu qabaa jedhu. Abiy Ahmad filannoo hin moo’anne, amaanaa Qeerrootti yeroof itti kenname.
Amaanaa kana akka hin nyaanne Qeerroon dura dhaabbachuu qabaa jedhan. Duulli maqaa balleessaa Lammaa Magarsaa irratti banamees. hin hojjatu. Lammaan nama haqaa, nama angoo fi fedhii dhuunfaaf hin bololle, ambaasaaddar dhugaa, bakka bu’aa sabboontoota ODP keessatti ukkaamsamanii maraa jechuun faarsan. Dubbiin Lammaayyu, Abiy maraachee jira. Kun dhufuun, kaballaa irraan dhiitichi waan itti dabalame fakkaata. Waan qabatuu fi dhiisuu wallaallee raata’ee dabballoota raatessaa jira. Namni biraallee bakka Lammaa bahee dhugaa awwaalamte dubbataa jedhe of nyaachaa jira. Ani nama hin qabu. Qofaa koo jira. Isin na hin gargaartan. Warri an maallaqaa
kafaluuf (daayaaspooraa bitelleen) na gargaaruu mannaa na hamatu. Kanaaf, an ganda Habashaa deema. Maraatu kana hundaaf, deebii isaa Itoophiyaa Atifarsimmii dha. Warra dhugaa Lammaa Magarsaa kana cimsuuf hin danda’an jedhee Abiy Ahmad sodaatu keessa tokko Itti. Aantuu Pireesdaantii Oromiyaa duraan Aadde Xayyibaa Hassan akka taate maddeen amanamoo keenya nutti himan. Obbo Warqinaa. Gabayyoollee baay’ee sodaachaa jira. Namoonni biraa Abiy sodaachaa
jirullee maqaa argannee jira. Oduu oowwitu biraa Finfinnee irra amma dhufte irratti hojjachaa jira. Akka dhumaateen isiniif dhiyeessuuf deemna.
Qabsoon oromoo carraa fi sadarkaa guddaa amansiisaa irra jira. Ni abdanna.Shakkii Hin qabnu Ni Injifanna .
Biyya keessaa fi Alaa irraa..#Dhaaba jaarmolee oromoo ciccimoo dantaa fi fedhii oromoo dabarsanii diinaaf Hin kennine bara dheeraaf Qormanii darban qabna. #Hayyoota olaanoo world class mind/Addunyaa kana akka salphaa tti xiinxalan baayyee qabna. #Gootota ija barbaddaa leencota rasaasa Hin sodaanne Miiliyoonota qabna. #Saba dammaqee mirga isaaf tokkummaan waliin dhaabbatee falmatu miliona 50 ol qabna . Kanaafuu qabeenya guddaa aja’iibaa kana hooggannee Bilisummaa oromoo bara dheeraaf awwaa jirru Akka Salphaatti Galmaan gahuun yaroon isaa Amma .Ta’uu baannaan salphina.
Abdii guddaa qabna.Shakkii Hin qabnu.Ni Injifanna .
Oromoon carraa lama qaba.
1,Ykn Diina PP waliin goruu.(Kan Abiy) jechuu dha.
2,Ykn Qabsoo oromoo isa dhugaa Bilisummaa oromoof qabsa’uu Gara oromoo tti goruu dha.